V ကြောင့် Hyundai ရဲ့ Genesis GV80 ကားတွေအားလုံး sold out သွားခဲ့တာလား? | News Bar Myanmar
V ကြောင့် Hyundai ရဲ့ Genesis GV80 ကားတွေအားလုံး sold out သွားခဲ့တာလား?
BTS ရဲ့ Run BTS အစီအစဉ် အပိုင်း ၁၁၀ ကို ရိုက်ကူးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့မှာ Hyundai Motor Group ရဲ့ HMG journal ကနေ V တစ်ယောက်တော့ Genesis GV80 SUV model ကို ဝယ်ယူသွားပြီလို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
GV80 ရဲ့ ခန့်မှန်းစျေးကတော့ model အလိုက် ကိုရီးယားဝမ် 60.7 million နဲ့ 67.7 million အထိ ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာပြီး သိပ်မကြာခင်ပဲ V ကြောင့် Genesis GV80 ဟာ အကုန်ရောင်းထွက်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ရှိလာပါတော့တယ်။
ကိုယ်သဘောကျတဲ့ idol အတွက် $50,000 အထက် သုံးဖို့ဆိုတာ အံ့ဩစရာကိစ္စပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့ ARMY တွေရဲ့ support နိုင်စွမ်းက ဒီထက်တောင်ပိုသေးသလို BTS နဲ့ပတ်သတ်သမျှ ထုတ်ကုန်တွေကလဲ အကုန် sold out ဖြစ်တာ ထုံးစံမို့လို့ မယုံချင်စရာလဲမရှိပါဘူး။
၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ BTS ဟာ Hyundai Palisade ရဲ့ ambassador အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရစဉ်ကတည်းက SUV skyrocketed ရဲ့ ဝယ်လိုအားက Hyundai ကိုတောင် အလုပ်ပိုများစေလောက်အောင် မြင့်တက်ခဲ့သေးတာပါ။
ဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက် Genesis of Colardo website မှာ Genesus GV80 တွေကို ဝယ်လို့မရနိုင်တော့တာလဲ BTS ကြောင့်ပဲလို့ ကားဝယ်သူတွေအားလုံးက ထစ်ထစ်ချယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ Genesis GV80 ကားတွေဟာ အခုချိန်ထိ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်မှာ official launch မလုပ်ရသေးတာမို့ stock ကိုမရှိသေးတာပါတဲ့။ ‘2021 Genesis GV80 နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အသေးစိတ်တွေနဲ့ စျေးနှုန်းကို တိတိကျကျမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။
လောလောဆယ်တော့ ခန့်မှန်းချေစျေးနှုန်းက အနိမ့်ဆုံး $49,900 ကနေ အမြင့်ဆုံး $70,950 အထိလို့သာ ခန့်မှန်းထားပါတယ်’ လို့ official website မှာ အသိပေးထားပါတယ်။
Genesis GV80 ကိုတော့ အစကဒီနှစ်နွေရာသီမှာပဲ US စျေးကွက်ကိုဖြန့်ချိဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် နှောင့်နှေးမှုအချို့ကြောင့် ဆောင်းဦးအထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ကိုရီးယားမှာစတင်ဖြန့်ချိတဲ့ ဇန်နဝါရီလကတည်းက reservations တွေတော့ကြိုတင်ကောက်ခံခဲ့တာပါတဲ့။
အခုထိတော့ V ကြောင့် sold out သွားတယ်ဆိုတာဟာ ကောလဟာလအဆင့်သာရှိသေးပေမယ့် V ဟာဒီကားကိုဝယ်သွားတယ်ဆိုကတည်းက website မှာ stock ရှိမရှိသွားကြည့်ပြီး ဝယ်ဖို့စီစဉ်ကြတဲ့ လူချမ်းသာ ARMY တွေရဲ့အစွမ်းကြောင့် တကယ့်သတင်းအမှန်ဖြစ်သွားမလားဆိုတာတော့ Genesis GV80 ရဲ့ official launch မှာစောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
Next သူငယ်ချင်းကိုအားပေးဖို့ အကြောင်းပြုပြီး movie date ခဲ့ကြတဲ့ Lee Byung Hoon တို့ဇနီးမောင်နှံ »
Previous « သြဂုတ်လရဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်ဆက်သူများအတွက် Brand Reputation အဆင့်များ